SUPERBAHİS FENERBAHÇE, ALİAĞA PETKİMSPOR'U KOLAY GEÇTİ - SÜPERBAHİS709.COM GİRİŞ
SUPERBAHİS FENERBAHÇE, ALİAĞA PETKİMSPOR’U KOLAY GEÇTİ
November 20, 2020 SÜPERBAHİS KAYIT SÜPERBAHİS GİRİŞ 5
Fenerbahçe meriri Aliağa Petkimspor 93-70 na izu nke ise nke ING Bọọlụ Nkata Super League.
FENERBAHÇE MERE 5 N’IME 5
Na nkeji iri na ise mbụ, nke malitere site na nkata ndị ọzọ, Fenerbahçe mere akara 18-9 na nkeji 7th na usoro 7-0. Oge nke mbụ mechara site na isi iri na abụọ nke otu odo-acha anụnụ anụnụ: 29-17.
Fenerbahçe Kenan Sipahi, Aliağa Petkimspor banyere nkeji nke abụọ na isi nke Canberk Kuş.
Otu ndị ọbịa bebara ihe dị iche na 5 na nkeji 17 na usoro nke 8-0: 39-34. Ọ bụ ezie na ọdịiche ahụ gbadara ruo 4 isi na nkeji 2 ikpeazụ nke ọkara mbụ, Fenerbahçe tinyere ibu ya na egwuregwu ahụ n’akụkụ fọdụrụnụ wee gaa 51-39 n’ime ụlọ mkpuchi.
Otu ụzọ n’ụzọ nke atọ malitere site na isi ihe akara 3 site Hakan Yapar site na ndị otu bịara. Ndị otu na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo, nke na-achịkwa egwuregwu ahụ ma gbasaa ọdịiche ahụ, banyere oge ikpeazụ na uru nke 18: 72-54.
Fenerbahçe bidoro nkeji ikpeazụ ya na Melih Mahmutoğlu na Biberovic’s 3-pointers, na-eweta akara ahụ na 78-54, na-ejide ọdịiche kachasị elu na asọmpi ahụ. Otu-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ, nke chebere ịdị elu ya na ngalaba fọdụrụnụ, hapụrụ ụlọ nzukọ ahụ 93-70.
Fenerbahçe nwetara nsonye 5 na njikọ a, ebe Aliağa Petkimspor tufuru nke anọ.
SUPERBAHİS983 JOSE SOSA, KONYASPOR MAÇINDA YOK SUPERBAHİS983 SOLSKJAER: BAŞAKŞEHİR ZOR BİR TAKIM SUPERBAHİS983 GALATASARAY ZORLU SİVAS DEPLASMANINDAN KAYIPSIZ DÖNDÜ SUPERBAHİS983 FENERBAHÇE-KONYASPOR – CANLI SKOR SUPERBAHİS983 ŞENOL GÜNEŞ’İN UĞURCAN TERCİHİ TARTIŞILIYOR SUPERBAHİS FRANCE FOOTBALL: PSG, BAŞAKŞEHİR’E KARŞI EZİLDİ SUPERBAHİS624 FENERBAHÇE-KONYASPOR – CANLI SKOR SUPERBAHİS RONALDO LAZİO’YU DA BOŞ GEÇMEDİ SUPERBAHİS JOSHUA KİMMİCH İLK YARIYI KAPATTI SUPERBAHİS746 TİB YER Mİ
5 Comments on SUPERBAHİS FENERBAHÇE, ALİAĞA PETKİMSPOR’U KOLAY GEÇTİ
BURAK November 21, 2020 at 5:10 am
ABDULAZİZ November 23, 2020 at 4:10 am
İLKNUR November 26, 2020 at 4:20 pm
OĞUZ November 27, 2020 at 8:40 pm
EBRU December 3, 2020 at 7:10 pm